Kitiho ny boot boot avy amin'ny sary kapila miaraka amin'ny MobaLiveCD | Vaovao momba ny gadget
MobaLiveCD dia fitaovana tsotra mahery vaika izay afaka manampy anay handinika sary ISO kapila ary koa, amin'ny pendrive USB, ao anatiny izay mety misy ireo rakitra fametrahana azy ao anaty rafitra fiasa manokana. Noho ireo toetra natoron'ny mpampiasa azy ity fampiharana ity dia mila manome fanazavana fohy momba ny fomba fiasan'ity fitaovana ity izahay.
Voalohany, ilaina ny manazava ny zavatra noresahintsika tamin'ny fiandohan'ny paragrafy teo aloha, izay nanolorantsika izany MobaLiveCD Tonga fitaovana tsotra izy io, ara-drariny io toe-javatra io rehefa misintona azy avy amin'ny tranokalan'ny ofisialiny (na avy amin'ny mpizara hafa), satria 1.5 megabytes ny lanjan'ny rakitra; Nilaza ihany koa izahay fa mahery ity fitaovana ity, zavatra mety mifanohitra amin'ny efa noresahinay momba ny habeny ary na izany aza, io hery io dia voaporofo amin'ny endriny tsirairay naroson'ny interface.
Fifanarahana am-pitiavana hitantanana ao amin'ny MobaLiveCD
Izao, rehefa avy nisintona izahay MobaLiveCD hahita rindrambaiko azo entina isika, ity dia iray amin'ireo fampahalalam-baovao voalohany hitanay ary ny tombony dia tsy hametraka na inona na inona tanteraka amin'ny solosaintsika isika. Anisan'ireo lafin-javatra tena manan-danja indrindra izay azo deraina amin'ny fampiasa an'ity fampiharana ity ireto manaraka ireto:
Mametraha safidy ao amin'ny menio manodidina ny sary kapila ISO.
Manomboha sary ISO izay manana boot boot.
Andramo raha misy pendrive USB misy boot boot an'ny rafitra miasa napetraka ao anatin'ireo accessories ireo.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny manamarina ny fampiasana MobaLiveCD, satria amin'izany dia hialantsika ireo asa tsy misy vokany loatra amin'ny fotoana rehetra. Ohatra, raha nahazo sary ISO isika ary namboarinay izany ka ny rakitra ao aminy dia ampahany amin'ny pendrive USB miaraka amina boot boot, mba hizaha toetra azy dia mila mamerina ny solosaina miaraka amin'ity fampidirana ity ao anaty port USB. Raha tsy manomboka amin'ny fitaovana ampidirina (rehefa avy namboarintsika ireo safidy booty ao amin'ny Bios) ny fitaovantsika, dia mety haneho izany amin'ny dingana nataontsika karazana hadisoana, noho izany dia asa very isika, satria tsy maintsy manomboka indray amin'ny Windows solosaina ary miverina miasa amin'ny fizotran'ny fanovana ny sary ISO amin'ny kapila USB.
Io no misy ny asan'ny tsirairay MobaLiveCD, satria azontsika atao ny misafidy ilay manondro LiveCD hahafahana misafidy ny sarinay ISO (izay misy ny mpampiorina ny rafitra miasa iray) ary manamarina raha manana boot boot izy; soso-kevitra fa manana dingana vitsivitsy hatao isika hiasa miaraka amin'ity rindranasa ity:
Misafidy ny kisary izahay MobaLiveCD miaraka amin'ny bokotra ankavanan'ny totozy sy izahay dia mitantana azy amin'ny maha Administrator.
Nisafidy ny safidy faha-2 izahay (Mihazakaiza LiveCD).
Mikaroka sy mifantina ny sarin'ny ISO izahay.
Manantena izahay fa hiseho ny varavarankely (karazana terminal baiko) izay hanoro anay ny fanatanterahana ny installer natolotry ny sary ISO.
Amin'ireto dingana tsotra ireto dia tsy maintsy ankafizintsika raha manana na tsia ny sary ISO boot boot; ny developer dia nanolotra hitsin-dàlana fitendry hahafahany jereo ny fizotrany amin'ny efijery feno (Alt + Ctrl + f), mitovy amin'ny tsy maintsy ampiasaintsika hivoahana io fomba fanao io. Raha hikatona ny varavarankely fitsapana dia tsy mila mampiasa afa-tsy ny fampifangaroana fototra Atl + CTRL izahay.
Ny safidy faha-3 sy farany dia hamela antsika hanao toy izany, na dia mampiasa USB flash drive aza; Nanolotra ohatra iray teo izahay izay nahitana ity kojakoja ity, ity no fitaovana lehibe indrindra azonay nanasongadinana MobaLiveCD, satria raha manandrana isika afindra amin'ny tsato-kazo USB ny atiny rehetra amin'ny sary ISO ka ny installer dia manomboka amin'ity fitaovana ity, avy eo azontsika atao ny mampiasa an'io safidy io hahalalantsika raha nahavita tsara ny fizotry ny famindrana rakitra.
Ny safidy voalohany dia manondro ny fampidirana safidy fanampiny ho an'ny menio manodidina ny sary ISO, Ilay mitovy amin'ny solosaina sasany (tsy amin'ny rafitra miasa rehetra). Tokony hazava ihany koa fa tsy maintsy novonoina tamin'ny alàlan'ny alàlan'ny mpiandraikitra ny fitaovana, raha tsy izany dia hisy lesoka vitsivitsy izay tsy hanatanteraka ny fitsapana an'ireo sary ISO.
Fanazavana fanampiny - Mbola mampiasa Windows XP ve ianao?… Mety hahaliana anao ny BootVis, Win8Usb - apetraho ny kinova fitsapana Windows 8 ary tehirizo amin'ny USB
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Software » Hakafakao amin'ny MobaLiveCD ny sary kapila
Tantano amin'ny alàlan'ny F-Secure KEY Password Manager ny tenimiafinay rehetra